TAMAANDHADA "CARAMEL RED" F1: SHARAXAAD GAAR AH OO KALA DUWAN EE YAANYO, DHALID, CAYAYAANKA ILAALINTA IYO FAA'IIDOOYINKA SII KORDHAYA - BEER CAGAARAN
Yaanyada-yaryar-yaryar-yaryar oo yaryar ayaa had iyo goor guusha. Kala duwanaan "Caramel Red" - ma aha wax laga reebo. Yaanyada casaan yar oo casaan leh ayaa kala soocaya dhadhanka dhadhanka leh, duurka yar ee daboolay miraha waxay u muuqdaan kuwo qurxiyo.
Waxyaalaha kala duwan ee yaanyo "Caramel Red" waxaa loo isticmaalaa salad iyo caano dhan. Waxaa loo isticmaali karaa in la sameeyo xabbad isku dhejisan, sida shaabadeeye. Kuwani waa miraha ugu macaan dhadhanka macaan ee aan la iloobi karin, qurxinta ugu fiican ee miisaska baydka iyo miisaska xafladaha.
Qeexida kala duwan ee yaanyada "Red Caramel"
Tamaandhada "Caramel Red" F1 - Geedka oo ah jiilkii kowaad, sare-u-kac ah, Bisaylkiisa hore, oo leh muddo dheer oo ah fruiting. No baadho baadiyaha, ilaa 2 m sare, jeexjeexan, leh qadar weyn oo tiro cagaaran. Caleemaha waa dhexdhexaad ah, cagaar madow, fudud. Miraha waxay u bislaadaan kooxo waaweyn oo ah 30-50 gogo '. Wax-soo-saarka ayaa fiican, laga bilaabo 1 jibbaaran. Beerta m ayaa laga qaadi karaa ilaa 4.8 kg oo yaanyo ah.
Miraha waa yar yahay, cufan, ilaa 3 cm dhexroor, miisaankeedu yahay 25-30 g. Maqaarku waa mid qaro weyn, xoogaa adag. Marka bislaado, midabka miraha isbeddelaya laga bilaabo cagaar madow ilaa guduud. Jirka waa mid aad u casiir leh, dhanaan-macaan. Qaybo tiro badan oo qoyan, qadarka sare ee sonkorta iyo fitamiin C
Tamaandhada "Caramel Red" - isku-dhafan, oo loo yaqaan 'Breeders growers'. Ku habboon gobollo kala duwan, waxaa lagula talinayaa inay koraan filim ama sariiro furan. Miro la soo goostay ayaa si fiican loo kaydiyaa, gaadiidku waa suurtogal. Kala duwan ayaa u fiican caanaha. Miraha yar yar ee cas cas oo aan lahayn crack, pickled ama cusbeyn muuqaal aad u xarrago leh, ku haboon isku darka khudradda. Waxaa laga yaabaa in lagu ilaaliyo marxaladda farsamooyinka farsamo. Miraha waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo suxuunta.
Ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee kala duwan:
qurux iyo xitaa miraha dhadhan fiican leh;
yaanyada ayaa ku fiican caanaha;
muddada dheer ee fruiting;
qabow iyo qaboobaanno qabow;
caabbinta cudurada waaweyn ee habeenkii.
Kala duwan ayaa leh faa'iido daro:
baadiyaha dheer wuxuu u baahan yahay samaynta;
Tamaandho waa in lagu koro taageero adag;
maqaarka midhaha waa mid adag.
Kala duwan "Caramel Red" waxaa lagu beeray geedo qeybta labaad ee bisha Maarso. Ka hor inta beerto, miraha waxaa lagu daaweeyaa kiciyaha kobaca, sun-saaridda looma baahna. Geedo waxay u baahan yihiin isku dar ah ciidda oo ka soo jeeda qaybo siman oo ah beerta beerta iyo humus, taas oo caanno webi ama cayayaanka lagu qasi karo. Seeds lagu beeray qoto dheer oo qiyaastii 2 cm, loola dhaqmay biyo iyo daboolay foorno. Heerkulka ugu wanaagsan ee biqilka waa 23-25 ​​digrii..
Ka dib markii la dhalaalayo, weelasha ayaa loo wareejiyaa meel wanaagsan oo ifaya. Goobtu waxay bilaabmaysaa marka labada labbo ee ugu horeeya ee runta ahi runta u soo baxaan geedo. Yaanyada yaryar waxaa lagu quudiyaa bacriminta kakabka. Goobidda sariiraha ama aqalka dhirta lagu koriyo waxay ku dhacdaa qeybta labaad ee bisha May. Geedo waa qabow-dulqaad leh, markaa waa inaadan ka baqin yaraanta muddada gaaban ee heerkulka.
1 kiiloomitir. M waxay qaadan karaan wax ka badan 3 duurka. Ash geed ama bacriminta macdanta adag ayaa la geliyaa godadka. Ka dib markii ay beerto dhirta u baahan tahay si fiican loo waraabiyo. Dhalooyinka sare waxaa ugu wanaagsan koritaanka taageerada xooggan, tusaale ahaan, trellis ah. Waa lagama maarmaan in la sameeyo baadiyaha 1 ama 2 buundo, inta badan talaabooyinka la saaro. Waxaa lagu talinayaa in laga saaro caleemaha hoose, tani waxay xaqiijin doontaa helitaanka iftiinka iyo hawada midhaha. Waraabinta yaanyada waxay u baahan tahay biyo diirran, sida lakabka ugu sarreeya ee ciidda.
Labo usbuuc kasta oo baadiyaha ah ayaa la quudin karaa bacriminta buuxda ee adag. Waxaa loo bedeli karaa arrin bakeeriga ah: shimbirta qajilan ee lagu daro ama duufaan.
Noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Caramel Red" F1 waa mid u adkaysata cudurrada ugu waaweyn ee habeenkii: Mukhaadaraadka tubaakada, Fusarium, Verticillium, faashad goosgoos ah, baaruud iyo kareemka cagaarka. Si kastaba ha ahaatee, tallaabooyinka ka hortagga waa in aan la dayicin. Xayawaanka waxaa loo baahan yahay in la furo inta badan, ka saarto haramaha. Si looga hortago cudurada fangas, waxaa fiican in ciidda carrada leh caws ama peat.
Dhirta yaryar waxaa lagula talinayaa in si joogto ah loo buufiyo daawada phytosporin ama diyaargarow kale oo bio-diyaargaraw leh saameynta antifungal. Insecticides ama decoctions ee dhirta iyaga ka badbaadiyo cayayaanka: celandine, chamomile, yarrow.
Waxyaabaha kala duwan ee yaanyada "Caramel Red" - noocyo xariif ah iyo midho leh oo qurxin kara karoon kasta. Qurxinta quruxda badani waxay ku fiican tahay caanaha, waxay si fiican u ilaalinayaan oo ay aad u jecel yihiin carruurta. Dalagyada waxay u baahan yihiin samaynta, inta kale ee daryeelkoodu waa sahlan yahay.